बुटवल – गएको साउन १० गते पूर्वी नवलपरासीको नवलपुर जिल्ला अदालतको गाडीमा आगजनी भयो । आगजनी गरेको बा२झ ३५०२ नम्बरको गाडी श्रेस्तेदार शारदादत्त बडू चड्ने गाडी कावासोतीस्थित थकाली चोकमा पाकिङ गरी राखेको अवस्थामा जलाइयो ।
साउन २६ गते शनिवार कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरंगी चौधरीको लु१झ ४०० नम्बरको गाडी आफ्नै डेरा अगाडि तौलिकहवामा पाकिङ गरेर राखेको अवस्थामा अज्ञात समूहले आगजनी गरी पूर्णरूपमा ध्वस्त बनायो ।
सोही दिन नै दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीको गाडी पनि अज्ञात समूहले जलायो । रा१झ १५२ नम्बरको गाडी बंगलाचुली–५ मुर्कुटीको कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरी राखिएको अवस्थामा अज्ञात समूहको आगजनीबाट जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो ।
फेरि साउन ३१ गते शुक्रवार सत्तारूढ दल नेकपा प्रदेश ५ का प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई लक्षित गरी उनको घर रूपन्देहीको सैनामैना–८ मा ३ वटा पेट्रोल बम प्रहार भए । बम प्रहारबाट मानवीय क्षति नभएपनि ढकालले प्रयोग गर्ने लु१ज ४५६ नम्बरको गाडी पछाडिपट्टि जलेर नष्ट भयो ।
बर्दियाको गेरूवा गाउँपालिका–६ को कार्यालयमा असार २३ गते आगजनी भएको थियो । यी सबै घटनामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको संलग्नता भएको प्रहरीले मौखिक जवाफ दिन्छ तर हालसम्म कुनै पनि घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
यसरी प्रदेश ५ मा सुरक्षा संवेदनशिलता बढ्दै गएको छ । जसले स्थानीय तह र प्रदेशबासीलाई झस्काएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ५ मा नेकपाका नेता कार्यकर्ता बढी रहेको बताइन्छ ।
विप्लव समूहले पछिल्लो ६ महिनामा ६ वटा सरकारी गाडी, सांसदको घर र वडा कार्यालयमा आगजनी बम आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रदेशमा विप्लवका १ सयभन्दा बढी नेताकार्यकतालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रदेश ५ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरेन्द्र विक्रम शाहले अज्ञात समूह भनिएपनि विप्लव नेतृत्वको समूहले नै आगजनीका गरेको बताए । ‘हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदैछौं । यिनीहरूको खोजी भइरहेको छ । यिनीहरू कहाँ–कहाँ बस्छन् भन्ने हामीले पत्ता लगाएका छौं । हामीले निगरानी बढाउँछौ,’ उनले भने । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारी गाडीलाई निशाना बनाएको छ ।
प्रतिबन्धसँगै उनीहरूले रातिको समयमा पाकिङ गरी राखिएका गाडीमा लक्षित गरी आक्रमण गरेका छन् । प्रदेश ५ विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आधार इलाका मानिन्छ । प्रदेशका स्थानीय तहदेखि सरकारी गाडी विप्लवको निशानामा पर्न थालेपछि प्रहरीले जनप्रतिनिधि र सरकारी गाडीको सुरक्षा बढाएको बताएको छ ।
कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपशम्शेर राणाले विप्लवका गतिविधिले सुरक्षा चुनौती बढेको बताए । ‘जनप्रतिनिधि पनि सचेत बन्न आवश्यक भएको छ । प्रतिबन्ध लगाएपछि यस क्षेत्रमा विप्लवका गतिविधि बढेका छन् ।’
गएको वैशाखमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लक्षित गर्दै रोल्पामा बम विस्फोट भएको थियो । सदरमुकाम लिवाङबाट त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुगारमा हुने आमसभामा सहभागी हुन जाँदै गर्दा गैरीगाउँस्थित राँकडाँडामा बम बिस्फोट भएको रोल्पा प्रहरीले बताएको छ ।
प्रदेशका धेरै स्थानीय तहसँग पनि विप्लव समूहले चन्दा आतंक मच्चाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । सो बिस्फोटको जिम्मा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले लिइसकेको छ । ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकाले विप्लवले गरेका कानून विपरीतका काममा निगरानी बढाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नियमित सम्पर्कमा रही प्रहरीले सुरक्षा चुनौति र चन्दा आतंकका विषयमा जानकारी लिन थालेको छ,’ उनले भने ।
प्रहरीले सरकारी गाडी प्रहरी चौकीमा राख्न आग्रह गरेको छ । ‘प्रदेशका सबै जिल्ला (१२) का प्रहरी कार्यालयमार्फत नियमित रुपमा जनप्रतिनिधिसँग सुरक्षाका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वपछि क्यान्टोनमेन्टमा नराखिएका हतियार अहिले प्रयोग भएको भेटिएको प्रहरीको दाबी छ । साना हतियार र खुला सिमाना प्रहरीका लागि चुनौती बनेका छन् तर प्रहरीले विप्लव समूहलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छैन ।
क्वारेन्टाइनको खाना खर्च प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइने
फेरि अर्को चक्रवात आउँदै, नेपालको कुन क्षेत्रमा पार्छ प्रभाव ?
यस्तो छ नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने कार्ययोजना [पूर्णपाठ]
गण्डकीमा १ हजार १०० घरधुरीलाई सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जा
पाकिस्तानी जासूसहरूले यो जानकारी पाएको भए भारत पर्थ्यो समस्यामा
कोरोना मनोविज्ञान र नयाँ रोजगारी : डा. रवीन्द्र पाण्डे